Dhimirka iyo Xirfadaha Xidhiidhka La leh
Tuesday November 07, 2017 - 09:08:41 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Iyada oo uu dhimirku kamid yahay xannuunada ugu halista badan ee dalkeena haysta, waxa lagama maarmaan noqotay in aqoon iyo waayo agarnimo dheeraad ah loo yeesho xirfadaha ay bah-wadaagta la tahay.
·Xirfada Addeega Bulshada iyo Dhimirka
Xirfada Adeegga Bulshadu (social work) waxay qayb libaax ka ciyaaraysay awood-siinta joogtada ah ee dadka qaba xannuunka dhimirka. Adeegayaasha bulshadu waxay ka qayb qaataan talo bixinta, adeeg diyaarinta iyo soo kabashada xannuunada kala duwan ee dhimirka. Adeegga bulshadu waxa uu isku xidhaa baahiyaha guud iyo kuwa gaarka ah ee dadka la dhibban xannuunka dhimirka iyaga oo la shaqaynaya xarumaha dhimirka, haay’adaha, waaxyaha dawlada iyo shaqaalaha heeganka ugu jira la dagaalanka xannuunka dhimirka.
·Xirfada Caafimaadka iyo Dhimirka
Caafimaadku waxa uu kamid yahay baahiyaha aasaasiga ah ee aadamuhu uu u baahan yahay. Caafimaad la’aantii waxqabad muuqda iyo mid qarsooniba ma dhacaan. Haddaba, qofka ama dadka dhimirka la xannuusanayaa waxay u baahan yihiin in lala tacaalo xannuunada kale ee weheliya dhimirka sida dhaawacyada iyo cuduradda kale. Dhawaanahan waxa soo badanaayay in laysku xidho dhimirka iyo adeegyada caafimaad ee deg dega ah.
·Sharciga iyo Dhimirka
Qof kasta oo dambi laga galaa ama isagu gala waxa uu u baahan yahay adeeg sharci oo badbaadiya naftiisa, hantidiisa iyo qoyskiisa. Maadama oo qofku aanu ka maarmi karin adeegyada sharci, qofka qaba dhimirku waxa uu u baahan yahay adeeg sharci oo uu helo haddii uu ku jiro dacwad ama ay jirto eedaymo lagu soo eedeyay qofka dhaawaca maskaxeed soo gaadhsiiyay dhibanaha.
·Cilmi-nafsiga iyo Dhimirka
Wada shaqaynta la’aanta dareenka qofka iyo waxyaabaha uu nolosha ka filayo oo dhici waaya ayaa mararka qaar keeni kara xannuunada dhimirka. Xaaladahan waxa lagu dawayn karaa aqoonta cilmi-nafsiga (psychology) oo ka gun gaadha xal u helida dhaawacyada ku yimaada maskaxda iyo dareenka qofka ee nolosha.
·Dhaqaalaha iyo Dhimirka
Kor u qaadista shaqaalaha ka hawl gala xarumaha dhimirka, shaqo abuurista dadka kasoo kabta xannuunada dhimirka, uqoondaynta dadka dhimirks miisaaniyad si loogu taageero iyo la kobciyo waxqabadyada dhaqaale ee ka caawinaya inay helaan dawooyin tayo leh iyo inay noqdaan qaar awood u leh inay suuqyada ganacsiga door muhiim ah ka ciyaaraan.
·Deegaanka Habboon iyo Dhimirka
Deegaanka cagaaran, xasiloon ee nadiifta ahi door muhiim ah ayuu ka ciyaaraa caafimaadka maskexeed ee dadka dhimirka la nool. Maanta dalkeena waxyaabaha adkeeya in la arko qof dhimirka ka bogsada waxa kamid ah iyada oo aanay jirin deegaan xasiloon oo ay uu ku ilaawo dhacdooyinkii xumaa ee saamaynta taban kulahaa naftiisa/nafteeda. Deegaanka oo la bedelaa waxa kale oo ay horseedi kartaa in goobaha buuqa iyo qaylada badan laga fogaado, in qaadka layska daayo, in dhibaatooyinka kale ee horseedi kara dhimirka sida sigaarka, goobaha dambiyadu ku badan yihiin, iyo dhammaanba dhacdooyin maskaxda boogaha ku yeeli kara.
Si kastaba ha ahaatee, lama soo koobi karo guud ahaan xirfadaha ku xeeran dhimirka kuwaas oo si toos ah iyo si dadban ban u taageeri kara dhaqdhaqaaqyada lagu caawinayo dadka dhimirka la nool dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, daawo ahaan iyo nafaqo ahaanba.
Qoraaga: Maxamed Rashiid Xuseen